Bit By Bit - Ukuqaphela ukuziphatha - 2.3.2.4 ephephukala phansi
Population drift, ukusetshenziswa drift, futhi uhlelo drift kwenze kube nzima ukusebenzisa big umthombo wemininingwane ukutadisha yesikhathi eside izitayela.
Omunye izinzuzo olukhulu eziningi ezinkulu imithombo idatha ukuthi ukuqoqa idatha ngokuhamba kwesikhathi. Izazi zokuhlalisana kwabantu ushayele lolu hlobo kuka-time idatha, idatha longitudinal. Futhi, ngokwemvelo, idatha longitudinal zibalulekile kakhulu ukutadisha ushintsho. Nokho, Ukuze thembeke ukukala ushintsho, uhlelo silinganiso ngokwayo kumelwe uzinze. Ngokwamazwi sezokuhlalisana kwabantu Otis Dudley Duncan, "uma ufuna ukukala ushintsho, musa ukushintsha ngesilinganiso" (Fischer 2011) .
Ngeshwa, abaningi big idatha izinhlelo-ikakhulukazi uhlelo ibhizinisi ukuthi ukudala awuthumbe iminonjana-kuthiwa digital ushintsha sonke isikhathi, inqubo ukuthi ngizobuya ukubiza drift. Ikakhulu, lezi zinhlelo siyashintsha ngezindlela ezintathu eziyinhloko: labantu drift (ushintsho endleleni ngubani bezisebenzisa), drift yokuziphatha (ushintsho endleleni abantu uzisebenzisa), kanye uhlelo drift (ushintsho okuhle kakhulu nokuphelele esimisweni ngokwayo). Imithombo ezintathu drift kusho ukuthi noma iyiphi iphethini idatha trace digital ungase ubangelwe ushintsho ezibalulekile emhlabeni, noma-ke ungase ubangelwe ngohlobo oluthile drift.
Umthombo wokuqala we drift-labantu drift-is ngubani usebenzisa uhlelo, futhi lokhu kushintsha esikalini eside futhi short esigcwele esikalini. Ngokwesibonelo, kusukela ngo-2008 kuya ukwethula isilinganiso seminyaka yobudala abantu zokuxhumana liye lenyuka. Ngaphezu silwe nalezi zimo yesikhathi eside, abantu besebenzisa uhlelo nganoma yimuphi umzuzu iyahlukahluka. Ngokwesibonelo, ngesikhathi US Presidential ukhetho 2012 inani Tweets ngezombusazwe okwabhalwa abesifazane likhuphuka usuku nosuku (Diaz et al. 2016) . Ngakho, yini okungase kubonakale ushintsho isimo Twitter-vesi lingase empeleni nje khona izinguquko e ngubani ukukhuluma nganoma yimuphi umzuzu.
Ngaphezu izinguquko osebenzisa uhlelo, kukhona izinguquko kanjani ohlelweni isetshenziswa. Ngokwesibonelo, ngesikhathi Hwebani Gezi Park imibhikisho Istanbul, eTurkey ngo 2013 ababhikishi washintsha ukusetshenziswa kwabo hashtag njengoba umbhikisho savela. Nakhu ukuthi Zeynep Tufekci (2014) wachaza i-drift, okuyinto wakwazi bona ngoba yena kokubona ukuziphatha on Twitter kanye emhlabathini
"Kwakwenzekeni waba ukuthi ngokushesha njengoba umbhikisho waba indaba okudlangile kulo, abantu abaningi. . . Bayeka ukusebenzisa hashtag ngaphandle ukuziqhakambisa into entsha. . .. Ngesikhathi imibhikisho waqhubeka, futhi ngisho yayidlondlobala, zama-hashtag wanqamuka. Interviews lwembula izizathu ezimbili eziholela kulesi. Okokuqala, once wonke umuntu wayazi nesihloko, hashtag kwaba ngesikhathi engadingekile esisodwa kanye nokumosha emsamo uhlamvu-kungagcini Twitter. Okwesibili, ama-hashtag babebhekwa kuphela njengoba ewusizo for amehlo ukuze isihloko esithile ngokukhethekile, hhayi ngoba ukukhuluma ngakho. "
Ngakho, abacwaningi ababefundelwa imibhikisho ngokuhlaziya Tweets ngama-hashtag ahlobene umbhikisho-kwakuyodingeka abe nombono ophambene okwakwenzeka ngenxa yalesi drift yokuziphatha. Ngokwesibonelo, bangase bakholelwa ukuthi ingxoxo yombhikisho bancipha eside ngaphambi kokuba empeleni bancipha.
Uhlobo lwesithathu of drift Yindlela drift. Kulokhu, akusikho abantu beshintsha noma esishintshayo yabo yokuziphatha, kodwa uhlelo uqobo beshintsha. Ngokwesibonelo, ngokuhamba kwesikhathi Facebook liye lenyuka nomkhawulo ubude updates isimo. Ngakho, noma iyiphi isifundo longitudinal of ozibhalile ngeke uchayeke ekuphathweni zobuciko okubangelwa lolu shintsho. System drift lihlobene eduze negama inkinga esibizwa nolokukhungathekisa algorithmic thina manje uvule.